दुर्घटना हुदैमा डराउनु पर्दैन ः सोनाम – NepalayaNews.com
दुर्घटना हुदैमा डराउनु पर्दैन ः सोनाम
११ माघ २०७४, बिहीबार ००:२०
बिशेषगरी न्युयोर्कका नेपाली माझ लामो समय देखी इन्सुरेन्स ब्यबसायमा लागेका सोनाम टि बरुवा यती बेला भने कमर्सियल अटो इन्सुरेन्स लगायतका अन्य सुबिधाका साथ न्युयोर्कको ज्याक्शनहाईटमा लामा इन्सुरेन्स मार्फत नेपाली लगायत अन्य समुदायका चार सय भन्दा बढी गाडीहरुको इन्सुरेन्स गरेका छन् । लामा इन्सुरेन्स मार्फत घर ,गाडी , मेडिकेट जीबनबीम तथा ब्यबसाय , लगायतका इन्सुरेन्स हरु हुन्छ ।
धेरै नेपालीहरुको मन जितेको लामा इन्सुरेन्स ले बिगत भन्दा झन सेवामा सुधार गरेको छ । यही इन्सुरेन्सको सेरोफेरोमा रहेर लामा इन्सुरेन्सका सोनाम लामा सगं नेपालय सगं गरिएको कुराकानी ।
कमर्सियल अटो इन्सुरेन्स गर्दा के के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ?
बिशेषगरी टिएलसी अन्तरगर्त चलाउने बिभिन्न कार कम्पनीहरुले सबै भन्दा कम दरमा बिमा गर्नेका लागी रेगुलर लाईसेन्स तिन बर्षको भएमा कम गर्ने सकिन्छ । यदी नेपालको लाईसेन्स भएमा पनि केही कम गर्ने सकिन्छ । यदी ३ बर्ष भन्दा बढि पुरानो लाईसेन्स भएमा बिभिन्न उपायहरु मार्फत कम हुने गर्छ ।
गाडी किन्दा पनि एउटै डिलरमा होइन २,३ बटा डिलरमा गएर बुझेर किन्नु पर्छ जसले गर्दा कम मुल्यमा किन्न सकिन्छ । गाडी किन्दा बिभिन्न फिचरहरु एड गरेको हुन्छ जुन तेती आबश्यक पनि हुदैन त्यसमा पनि बिचार गर्नु पर्छ ।
के कुरा अपनाउन सकेमा कम इन्सुरेन्स तिर्न सकिन्छ ?
न्युनतम बेस रकम त एउटै हुन्छ । त्यसका अलबा ड्यास बोड क्यामराहरु दिन्छ । समयमा डिफेन्सिङ्ग ड्राईभिङ्ग कोष लिने , सुरक्षित रुपमा गाडी चलाउने एक् दुई मिनेट ढिलो भएर खासै फरक पर्देन । गाडी सगं भन्दा पनि बढि साईकलमेन तथा मान्छे सगं होशीयार हुनु पर्छ यदी साईकलमेन तथा मान्छे सगं दुर्घटना भएमा अमेरिकन टानजिटले त इन्सुरेन्स नबिकरण नै गर्देन ।
के कुराले गर्दा बढि इन्सुरेन्स तिर्नु पर्छ ?
सुरक्षित रुपमा गाडी नचलाएमा बढि इन्सुरेन्स तिर्नु पर्छ किनकी जसले दुर्घटना भएपछि आफनो गल्ती नभएमा खासै फरक पर्दैन तर आफनो गल्ती भएमा बढि रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ । सुरक्षित ड्राईभिङ्ग छुट पाईराखेकोमा जब दुर्घटनमा परिन्छ त्यसपछि त्यो छुट बाट बञ्चित हुन्छ ।
आफुसगंं भईरहेको इन्सुरेन्स कम्पनी मन नपरेमा कती बेला परिबर्तन गर्ने मिल्छ ?
यही बेला हो । यो समयमा इन्सुरेन्स कम्पनी बाट नबिकरणको लागी फर्म आएको हुन्छ । नबिकरणको कपी रेगुलर लाईसेन्स , टिएलसीको लाईसेन्स , गाडीको कागजपत्रहरु र बेस लेटर भएमा हामीले अरु सबै काम गर्छौ । यही समयमा नै हो यदी गरीरेहको इन्सुरेन्स मन नपरेमा परिबर्तन गर्ने समय february महिनाको २१ तारिक अगाडी सम्म ब्रोकर परिबर्तन गर्ने मिल्छ । यदी नेपाली समुदायलाई आफ्नै भाषा बोल्ने तथा आफ्नै समुदायको ब्यक्तीलाई सहयोग गर्नेका लागी पनि यो समय उचित हो ।
यदी गरी रहेको इन्सुरेन्स र तपाईले गर्ने इन्सुरेन्स पनि एउटै भएमा के हुन्छ ?
सेम कम्पनी हो भने प्रिमियम परिबर्तन हुदैन । उबरको अफिसमा जादा कतिले त तेतै लिदा समस्या परेको पनि सुनेको छु । तर हामी सगं लिएको सेवा र अर्को कम्पनी सगं लिएको सेवामा फरक हुन सक्छ । हामीले टिएलसीको मात्र काम गर्देनौ अरु सेवा एबं परामर्श पनि दिन्छौ । एउटै भाषा बोल्ने भएकोले इन्सुरेन्सकर्तालाई धेरै सजिलो र सहज पनि हुन्छ । दुर्घटना हुदाँ हामीलाई बताउने कुरा र अर्को बिदेशी कम्पनी सगं गर्ने कुरामा पनि फरक पर्छ । उहाँले भन्न खोजेको कुरा हामी बुझन सक्छौ र त्यही अनुसार रिपोट गर्ने सकिन्छ । त्यसैले ब्रोकर चेन्ज गर्दौमा रकम परक हुदैन खाली सेवा मात्र फरक हुन्छ ।
कमर्सियल अटो इन्सुरेन्स के कती प्ररकार हुन्छन् ?
कमर्सियल अटो इन्सुरेन्स खास गरी दुई पाटाहरु हुन्छन् liabilities इन्सुरेन्स र फिजिकल इन्सुरेन्स हुन्छन कतिपय नयाँ डाईभरहरुलाई यी कुरा थाहा हुदैन । यदी नयाँ हो भने फिजिकल इन्सुरेन्स लिदा राम्रो हो यसले गर्दे दुईतिर फाईदा हुन्छ गाडी तलमाथी भएमा त्यसको लागी पनि सुरक्षित भो भने अर्को तिर तिरेको रकम टयाक्स फाइल गर्दा घटाउन पनि पार्यौ। liabilities इन्सुरेन्स गर्ने कम्पनीले फिजिकल इन्सुरेन्स गर्देन त्यसैले फरक फरक कम्पनी सगं लिनु पर्छ । तर liabilities इन्सुरेन्स अनिबार्य लिनु पर्छ ।
दुर्घटना भएमा के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ?
आपसमा सुचना आदन प्रदान गरेपछि किन पर्खेने भन्ने सोचाईले आफनो लागी घाटा हो , किनकी सुचना हामीलाई दिएर हामीले फाइल गर्छौ तर त्यो मान्छेले पछि इन्कार गर्छा त्यसले गर्दा हामीलाई समास्या पर्छ । दुर्घटना हुदाँ डराउनु पर्देन किनकी कानुनी रुपमा इन्सुरेन्स सबै कागजजात छ भने दुर्घटना भएपछि मेरै गल्ती हो भनेर महशुश पनि गर्नु हुदैन । यदी भएमा पनि तेती बेला महशुश गर्नु हुर्दैन । र प्रहरीलाई तुरुन्त बोलाउनु पर्छ रिपोट बनाउनु पर्छ ।
दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने कानुनी अधिकार थिएन	१९ जेष्ठ २०७६, आईतवार १४:५९
अमेरिकाले तिब्बतलाई स्वतन्त्र देश मान्ने ११ माघ २०७४, बिहीबार ००:२०
कोरोनाका कारण अमेरिकामा १ लाख ५ हजार बढीले ज्यान गुमाए ११ माघ २०७४, बिहीबार ००:२०
ट्रम्पले स्थगित गरे औद्योगिक राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन ११ माघ २०७४, बिहीबार ००:२०